शिक्षा सचिवको ‘सिकाउने शैली’ - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
शिक्षा सचिवको ‘सिकाउने शैली’
शिक्षा सचिव खगराज बरालको पुस्तक ‘सिकाउने शैली’ बजारमा आएको छ । शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले एक कार्यक्रमका बीच पुस्तकको विमोचन गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा निकै कमजोर भएकाले यसतर्फ सबै जिम्मेवार पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए । पुस्तकले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अहिलेको आवश्यकता गुणत्मक शिक्षा भएको औँल्याए ।
कार्यक्रममा पुस्तकको समिक्षा गर्दै प्रा. डा. जयराज आचार्यले पुस्तक शैक्षिक क्षेत्रको व्यवहारीक अनुभव भएको बताए । लेखकले नेपालको विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले पुस्तक अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीका लागि पठनीय रहेको उल्लेख गरे ।
पुस्तकबारे बोल्दै कवि मोमिला जोशीले लेखकले पुस्तकमा शैक्षिक अनुभवको रंगहरु समेटेको बताइन् । पुस्तकले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थालाई चित्रण र आगामी दिनका लागि मार्गदर्शनसमेत गरेको उनको भनाई थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले पुस्तक पढ्दा आफ्नो स्कुले जीवन अनुभव भएको बताइन् । सबैले पुस्तक पढ्दा आफ्ना विगतका दिनहरु अनुभव गर्ने उनको जिकिर थियो ।
शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशिल रहँदा आफूले अनुभव गरेका घटनाक्रम र विषयलाई पुस्तकमार्फत प्रस्तुत गरेको लेखक बरालले बताए । पुस्तकमा कुनै बनावटी विषय नसमेटिएको र यो एउटा संस्मरणको रुपमा रहेको उनको भनाई थियो ।
पुस्तक सांग्रीला बुक्सले बजारमा ल्याएको हो ।
प्रकाशित २७ पुस २०७५, शुक्रबार | 2019-01-11 19:54:34